डिआईजी चोख्याउन प्रदेश प्रहरीको विज्ञप्ति : पैसा माग्ने महिलाले नाम जोडेको आरोप ! - Kantipath.com
प्रदेश २ का नेपाल प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमेश रञ्जीतकारको नाममा पैसा उठाउने एक जना महिलालाई रौतहट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा सुशीला थापा रहेकी छिन् । थापालाई सर्लाही प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी रौतहटका प्रमुख एसपी विनोद घिमिरेले बताएका छन् । हाल थापा नियन्त्रणमा रहेको तथा घटना बारे आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको एसपी घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
शिक्षिका सुशीला थापाले डीआईजी उमेश रञ्जीतकारको नाम बदनाम गराउने काम गर्दै हिँडेकाले उनीमाथि अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । गरुडास्थित प्रहरी विद्यालयमा खाली रहेको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति दिलाइदिने भन्दै डीआईजी रञ्जीतकारको नाम लिँदै थापाले पर्सामा उदेश पाण्डेसँग ६ लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ गरेको अडियो केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो ।
डिआईजीको नाम भजाएर जागिर स्थायी गरिदिने भन्दै ६ लाख असुली (अडियो)
महिलाले पैसाको बार्गेनिङ्ग गर्दा गर्दै डिआईजीको फोन आएको भन्ने प्रष्टसंग सुन्न सकिन्छ तर २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयले भने डिआईजी रञ्जीतकारलाई चोख्याउन लागि परेको छ । प्रदेश प्रहरीको सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण शाखाले विज्ञप्ति निकाल्दै अडियो सम्बन्धि समाचार भ्रामक भन्दै अनलाईनको नामै किटेर समाचारको खण्डन गरेको छ । प्रदेश प्रहरीले महिला पक्राउ परिसकेको र आर्थिक लाभको लागि उनले डिआईजिको नाम जोडेको बताएको छ ।
रौतहटको गरुडास्थित नेपाल पुलिस स्कुलमा खाली रहेको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति दिलाइदिने भन्दै डीआईजी रञ्जीतकारको नाम लिँदै ति महिलाले पैसामा बार्गेनिङ गरेकी छन्। प्राप्त अडिओेमा सर्लाहीकी सुशीला थापा दाहालले पर्सा मणिपुरका उदासकुमार पाण्डेसँग ६ लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको सुन्न सकिन्छ । अडिओमा दाहालले पाण्डेसँग पैसाको बार्गेनिङ गर्दा सोचेको भन्दा बढी डिमाण्ड भएको बताएकी छिन्।
डिआईजीको नाम लिंदै पैसा असुल्ने महिला पक्राउ
दाहालले ६ लाख भन्दा कम रकममा कुरा नमिल्ने बताउँदै ३ जना मिलेर काम गरिदिने बताएकी छिन्। दाहालका अनुसार पैसा पाएपछि पुलिस स्कुलका प्रिन्सिपल, डीआईजी र अर्का एक व्यक्ति मिलेर पाण्डेलाई स्थायी गरिदिने हो। पाण्डेसँग कुराकानी हुँदै गर्दाका बखत डीआईजी रञ्जीतकारले आफूलाई फोन गरेको भन्दै दाहालले फोन समेत काटिदिएकी छिन् ।
Previous Previous post: अठार लाख ७५ हजार नगदसहित जुवाको खालबाट १३ पक्राउ
Next Next post: २२ करोड ५७ लाखको ठेक्का लिएर ठेकदार अलपत्र : सडकको बेहाल !
निवास भत्काउन थालेपछि ओलीलाई सारियो, सरकारी जग्गामा नेकपा नेताकाे राज
सरकार २३२ रोपनी जग्गा कहाँ हरायो ?